Vondrona Amerikana Latina Mpisolovava Sy Mpanao Gazety, Nahazo Ny Lokan’ny Fahalalahana Maneho Hevitra Nomen’ny “Index on Censorship” – Tondro Momba Ny Sivana · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Journalism in the Americas Blog
Voadika ny 24 Janoary 2016 16:59 GMT
Ireo mpandresy tamin'ny 2014: Shahzad Ahmad, Rahim Haciyev, Shu Choudhary, Mayam Mahmoud. Sary avy amin'i Alex Brenner ho an'ny “Index on Censorship”.
Nalefa voalohany tao amin'ny Bilaogy Ny Asa Fanaovana Gazety Ao Americas ito tantaran'i Lorenzo Holt ito, ary naverina nalefa teto, nahazoana alàlana.
Samy tafiditra tao anatin'ilay lisitra lava anà kandidà amin'ny Lokan'ny Fahalalahana Miteny omen'ny “Index on Censorship” 2016, nambara ny 16 Desambra ireo mpanao gazety, fikambanana media ary ireo mpiaro ny fahalalahana maneho hevitra avy any El Salvador, Kiobà, Arzantina, Meksika ary Ekoadaoro.
“Maneho faherezan-tsaina, fahaiza-mamorona ary finiavana amin'ny ady amin'ny rahon'ny sivana any amin'ny faritra rehetra manerana ny tany ireo olona sy fikambanana tao anatin'ilay lisitra #Index100,” hoy ny nolazain'ny Jodie Ginsberg Tale Mpanatanteraky ny Index on Censorship, araka ny fanambaràna an-gazety nataon'ny fikambanana. “Vavolombelon'ny fahalalahana miteny manerantany izy ireo. Raha tsy nisy ireo ezaka nataon'izy ireo teo anatrehan'ireo sakana lehibe, matetika eo ambany sotasota mahery setray, ho toerana ratsy sy maizina ny tany.”
Ny 19 Janoary 2016 ny lisitra fohin'ireo mpifaninana no holazain'ny Index on Censorship, fikambanana iraisampirenena momba ny fahalalahana miteny, mitoetra ao Angletera. Holazaina ao anaty fetibe fizaràna loka ireo mpandresy, ny volana Aprily ho avy ity, any Londres, ary hotafiditra amina fandaharanasa mahazo fanampiana mandritra ny herintaona ihany koa.
Ahitàna olona sy vondrona miisa 100 ny lisitra #Index100, avy aminà firenena miisa 53 izay navahana avy taminà lisitra mpifaninana maherin'ny 500, araka ny vohikalan'ny Index. Loka omena araka ireo sokajy: zavakanto, fampielezankevitra, fikatrohana nomerika ary fanaovana gazety.
Tafiditra ao anatin'ilay lisitra #Index100 ireo mpanao gazety Salvadoriana Roberto Valencia, Óscar Martinez ary Daniel Valencia Caravantes, tao anatin'ny sokajin'ny fanaovana gazety, noho ny asa fanadihadiana naton-dry zareo ho an'ny El Faro, loharanom-baovao hita ety anaty Aterineto.
Ny 22 Jolay, nandefa tantara iray mikasika ny tranga izay namonoan'ny polisy olona valo ireo mpanao gazety. Nanohitra ny fitantarana ofisialy ny zava-nitranga avy amin'ireo manampahefana ny tantarany, araka ny voalazan'ny The Nation. Vao navoaka ilay tantara, nifindra toerana izy telo, niomana mialoha ny amin'ireo fandrahonana nanaraka taty aoriana.
Tafiditra tao anatin'ny #Index100 ao amin'ny sokajin'ny fanaovan-gazety ihany koa i Roberto de Jesus Guerra Pérez an'ny Hablemos Press, masoivohom-baovao Kiobàna noforonina ny taona 2009 ho làlana hidifiana ny sivana ofisialy sy fampielezankevitry ny governemanta.
Na voabahana aza ny vohikalany ao amin'ny Aterineto, ary tsy afaka arahana avy amin'ny alàlan'ireo loharanom-baovao ofisialy ireo fandaharany, mbola manonta gazety eo amin'ny 400 isa eo izy ireo isan-kerinandro ary manome fampiofanana ho an'ireo mpanao gazety, araka ny Reporters Without Borders (Mpanao Gazety Tsy Voafetran-tSisintany). Nialoha ny nanorenana ny masoivoho, efa ela no mpanohitra ary niatrika famonjàna matetika avy amin'ny governemanta Kiobàna i Guerra Pérez.
Ny tranonkala mpanamarina ny zavamisy, Chequeado avy any Arzantina, no nahazo tao amin'ilay lisitra nisy ny sokajy fikatrohana nomerika. Nifandray tamin'ireo asa lehiben'ny vondrona ny Index on Censorship mba hanome fangaraharàna tamin'ny fampielezankevitry ny fifaninana ho filoham-pirenena 2015. Tafiditra tao amin'io sokajy io ihany koa ny Méxicoleaks, sehatra nomerika vao haingana izay manaiky ireo loharanom-baovao tsy itononana anarana avy amin'ny vahoaka.
Ny Fikambanana ho Fanarahamaso ny Media sy Fandalinana avy ao Ekoatora (na Fundamedios, araka ny ahalalàna azy amin'ny teny Espaniola), dia tafiditra ihany koa noho ny ezaka nataony nanara-maso ireo fanafihana ny fahalalahan'ny mpanao gazety, ary noho ny fanohanany ny zo ara-dalàn'ireo gazety an-tsoratra sy ireo mpanao gazety miatrika fandrahonana avy amin'ny governemanta. Ny Septambra, nanomboka dingana iray ho fanakatonana ilay fikambanana ny governemanta Ekoatoriana, fa tsy notohizana tamin'ny fotoana farany taorian'ny horakoraka naterakyny hatezerana tao amin'ny firenena sy iraisampirenena.
Tsy ny fikambanana na olon-tokana no afaka misoratra na manondro ho amin'ny lokan'ny Fahafahana Miteny omen'ny Index for Censorship. Notsaraina tamin'ny herin-tsainy, fahaiza-mamorona, ny fifikirana ary ny vokatra azo tsapain-tànana tao anatin'ny 12 volana farany, ireo mpifaninana. Mametraka mpitsara maromaro ny Index on Censorship isan-taona, avy amin'ireo “feo malaza erantany manana traikefa amin'ny fisoloana vava, fanaovana gazety, ny zavakanto sy zon'olombelona.”
Ao anatin'ireo mpitsara maro tamin'ity taona ity ilay Kolombiana, María Teresa Ronderos, mpanao gazety nahazo loka, izay tafiditra amin'ireo fikambanana maro fanaovana gazety any Amerika Latina.